Dhallinyaro Soomaaliyeed Oo Lagu Diley Koonfur Africa – Goobjoog News
Koox burcad Koonfur Afrikaan ah ayaa galbeedka magaalada Cape Town waxay ku dileen Labo wiil dhallinyaro Soomaali ah, kuwaasi oo halkaa ku lahaa xarun ganacsi.
Wiilashan oo xalay fiidkii la diley ayaa lagu kala magacaabaa, Ismaaciil Cabdo Macow iyo Cali Maxamuud Cadow, waxaana la sheegay in markii la diley kadib lacago laga qaatay dukaankooda oo ku yaalla meel ay ku badan yihiin dadka Madowga ah ee dalkaasi.
Dhanka kale, sidey inoo sheegeen dad Soomaaliyeed oo ku sugan Koonfur Africa, waxaa magaalada Cape Town lagu dhaawacay Saddex wiil dhallinyaro Soomaaliyeed ah, waxaana soo weeraray rag burcad ah, iyaga oo laga qaatay lacag u taallay dukaan ay ku sugnaayeen.
Bishan kaliya waxaa dalka Koonfur Africa lagu diley ku dhowaad 10 qof Soomaali ah, iyadoo weli aana Booliiska dalkaasi waxbo ka qaban arrintan.
Faah faahin: Diyaarado Duqeyn Ka Geystay Deegaanka Qalimow, Sh/dhexe